Olona maro manodidina anao ve no tsy miraika ara-bakiteny (vatana tsy mananaina)? : Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Jolay 2019	• 17 Comments
Sarotra ny maka sary an-tsaina hoe, fa manontany tena ve ianao raha misy olona "manodidina anao" ny olona manodidina anao? Tsy maintsy mijery fotsiny ny fiainanao andavanandro ianao ary indraindray dia mahita olona afaka miara-miasa amim-piraisan-tsaina, saingy iza no afaka mandeha tsy misy fitiavan-tena amin'ny hafa na manao raharaham-barotra amin'ny tarehiny fa ny tsirairay manafoana ny 'mahaolona'.
George Ivanovich Gurdjieff dia filozofa Grika-Armeniana mampiady hevitra, mystika, mpanoratra, mpanoratra, choreographer ary mpivarotra. Raha toa ianao ka iharan'ny fanoherana manohitra izany, satria mety ho anti-grika na anti-Armeniana ianao, dia alaivo an-tsoratra ary vakiana ny fampidinana kolotoraly alohan'ny famolavolana azy. ity fanambarana ity avy amin'ny lehilahy:Ny ampaham-potoana manan-danja amin'ny olona hitanay teny an-dalambe dia olona tsy misy idirany, izany hoe efa maty izy ireo. Fahasoavana ho antsika izany fa tsy mahita izany isika ary tsy mahafantatra izany. Raha fantatsika hoe firy tokoa ny olona maty ary ny firenan'ireny maty ireny no manapaka ny fiainantsika, tsy maintsy miala amin'ny horohoro isika."
Angaha moa isika tokony handray izany ara-bakiteny kokoa noho ny eritreritsika? Mety efa fantatsika ny sarimihetsika sy ny andian-tantara izay hitantsika ireo robots izay toa velona loatra amin'ny hoavy ka tsy hahita ny fahasamihafana intsony. Robots izay afaka manaiky sy manaiky ny fihetseham-pon'ny olombelona. Ny tena olom-pirenen'ny Netflix dia ohatra tsara amin'izany. Ho an'ny fahatsapana, jereo ny lahatsary YouTube etsy ambany (ary vakio ny ambany).
Ny robot sy ny avatar
Ity serasera ity dia ohatra iray amin'ny karazana robot iray izay azontsika andrasana amin'ny fiarahamonina mandritra ny fotoana fohy. Amin'ny farany, tokony hoeritreretintsika aloha hoe inona ilay horonantsary Ny fahamboniana dia nampiseho fa ny biolojia manontolo dia azo averina amin'ny alalan'ny nanotechnology. Ny mpahay siansa Israeliana dia efa nanamboatra fanontam-pirinty tamin'ity taona ity izay afaka manonta ireo sela misy sela mifototra amin'ny tsimok'aretina momba ny sela, ohatra ao amin'ny fo iray (jereo ny horonantsary etsy ambany). Na izany aza, ny siansa dia antenaina ihany koa ny hahatratra ny fotoana ahafahan'ny bakteria ao amin'ny vatan'ny solosaina nofonosin'ny nano-tech izay mety hanitsy ny hadisoana. Mahagaga anao ve izany? Dia eritrereto avy eo ny zava-mitranga raha manana ratra ianao ary ny fomba anatanterahan'ny vatan'olombelona io fanasitranana tena io. (Vakio eo ambanin'ny lahatsary)
Ny lalàna famindram-pahefana any Holandy dia efa nanome antoka fa ny taova dia (ara-dalàna) dia lasa fananana fanjakana. Ny teknôlôjia fanontam-pirinty Israeliana dia mampiseho fa io lalàna io dia tsy misy dikany loatra; satria ao amin'ny firenena tahaka an'i Holandy misy vondron'ny toro-hevitra antsoina hoe 'filankevitra ara-pahasalamana' dia azonao an-tsaina fa tena fantatry ny olona fa tonga io teknolojia io ary mety ho azo antoka kokoa ny fanontana ny taova amin'ny hoavy. Ireo ôrdônansy printy dia tsy ho nolavin'ny vatana, noho izany dia tsy misy lalan-drà hisakanana ny voka-dratsin'ny vatana. Raha ny marina, dia vita pirinty mifototra amin'ny ADN izy ireo.
Na ahoana na ahoana, mahaliana ny mahamarika fa ny vatana dia manosika ny fanolanana fikambanana vahiny. Mahaliana ihany koa ny mahita ny olona izay, ohatra, mahazo fo nomena, indraindray mizaka ny toetran'ny mpamatsy, saingy ankoatra izany.
Ny lalàna fanomezana fanomezan-tsolika dia nanome antoka fa ny fanjakana dia manana ny taova ary ny zava-drehetra izay tohanan'ny fanjakana, ny fanjakana dia mety (ara-dalàna) mitazona ny fikojakojana tsy misy fangarony. Manao izany miaraka amin'ireo tranobe misy azy, miaraka amin'ny foto-drafitrasany ary amin'ny hoavy angamba koa miaraka amin'ireo fananana vaovao: ireo taova. Azo atao anaty aterineto amin'ny alàlan'ny tambajotra 5G sy ny fomba fanovana rahateo antsoina hoe CRISPR-CAS12 (jereo ny fampahafantarana TED etsy ambany ary vakio eto ambany).
Raha efa nahatsapa vetivety ianao, dia mety ho hitanao fa ny vatan'olombelona (sy ny biôlôjika rehetra) dia lasa biosystémique indray mandeha tsy tapaka amin'ny hoavy, ny ampahany tsirairay amin'izany dia ho lasa manova sy mampifanaraka.
Ity fampidirana ity dia ilaina mba hanomezana anao fahatakarana tsara kokoa ny fomba fisainan'ireo manampahefana lehibe orinasa sy ny zavatra ataon'izy ireo. Ohatra, ny filohan'ny teknis'i Google, ny mpamorona sy ny filozofa Ray Kurzweil dia nilaza fa amin'ny 2045 dia tsy mety maty isika ary afaka miaina anaty tontolo simulative izay tena azo iainana tokoa ka tsy fantatsika fa simba izany. Lazainy ihany koa fa afaka manana satelita an-toeto-teolojia sy avaratry ny digital izahay ary mampakatra ny tenantsika amin'ireo avatars.
Inona no atao hoe "fahatsiarovan-tena" na "fanahy"?
Ny fanontaniana lehibe dia hoe: Iza na inona no mampakatra ireo avatar? Araka ny hevitr'ireo transhumanista toa an'i Ray Kurzweil, ny fahatsiarovan-tena dia ny vokatry ny isan'ny neurons ao amin'ny atidoha. Raha toa ianao ka hanangana robot miaraka amin'ny mpikirakira nanolo-teknolojia ampy tsara (neurons) izay betsaka be toy ny ao amin'ny atidoha, dia mitombo ny fahatsiarovan-tena. Satria mbola tsy vonona ny hanavao ny atidoha ny teknolojia, efa miasa eo amin'ny vahaolana rahona ny orinasa toa an'i Google. Azonao atao ny milaza fa ny aterineto dia fitaovana goavana hampifandraisana ireo ordinatera maro amin'ny fomba toy izany mba hahafahany mamorona atidoha virtoaly. Ny teknolojia blockchain dia mety ho fitaovana ilaina amin'izany. Ankoatr'izany, raha manana ordinatera ao anaty tambajotra ihany koa ianao, dia ho tonga tsara izany. Ireo orinasa lehibe teknika dia be atao amin'ny fananganana tamba-jotra nerlandey ary ny anaran'ny tenany dia porofon'ny inona ny tanjona farany.
Kanefa te-hiverina hiverina aho ary hijanona amin'ny lohahevitra momba ny 'fanentanana'. Moa ve ny hevitra hoe fantatry ny olona satria manana neo-cortex izy ireo (ary noho izany ny neurons, araka ny filazan'i Ray Kurzweil) mifanohitra amin'ny biby mampinono maro hafa? Sa misy zavatra iray izay manana fiaviana tanteraka?
Ho an'ny hevitra, andeha hojerentsika fa afaka mampakatra ny "fanentanana" manodidina 2045 ho an'ny tontolo nomerika ianao; dingana iray izay mihazakazaka ao amin'ny sehatry ny cloud cloud noho ny zava-misy virtoaly, ohatra. Ary alaivo sary an-tsaina ny fahatsapana fa ny orinasan'i Elon Musk dia afaka manantona ny atidohantsika amin'ny aterineto. Avy eo ianao dia afaka manandratra ny karazan-javatra rehetra ao amin'ny atidohan'ny 'vatantsika' tena izy amin'izao fotoana izao toa ny fikasihana, ny fofona, ny sofina, ny maso ary ny fihetseham-po (ny teboka, ny fahantrana, sns). Raha toa ka manangana tranokala vaovao momba ny tany i Google, dia afaka mandeha eny ambonin'ny tany tahaka ny nataon'i Jake Sully ao amin'ny tontolo manga Avatar an'ny sarimihetsika 2009.
Ny fampisehoana ny sarimihetsika Surrogates etsy ambany dia angamba ohatra mora kokoa hanazavako izay tiako handehanana amin'ny hevitrao. Andramo ka jereo hoe misy foana ny tsipiky ny olona 'voalohany' sy ny 'avatar'. Na izany aza, ity sarimihetsika Surrogates ity dia miorina amin'ny 'robots' na 'avatars' toy ny hita ao amin'ny andian-tantara toy ny 'Real Humans' amin'ny Netflix. Na izany aza, raha mihevitra ny famolavolana ara-tantara izay mipetaka tanteraka amin'ny sehatry ny rahona, na dia ny dizitaly aza ny digital dia ny 'simulation' dia 'ivelan'ny tontolo azo tsapain-tanana'. Azonao atao, ohatra, mandry eo am-pandriana miaraka amin'ny ati-dohan'ny ati-doha ianao ary ny mpiara-miasa eo am-pandriana eo akaikinao dia tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe inona marina ny simulation misy anao amin'izao fotoana izao. Angamba ny vatanao dia manafintohina satria ny atidohanao dia miady mafy amin'ireo lehilahy manga amin'ny simulation. (Vakio eo ambanin'ny lahatsary).
Raha, araka ny filazan'ny mpahay siansa toy ny Ray Kurzweil an'i Google sy ireo mpanao transhumanista hafa, dia azo atao ny miaina ao anatin'ireny simulation ireny amin'ny hoavy tsy ho ela, tsy ho afaka hanontany tena ve isika raha tsy miaina toy izany isika? Tsy ireo rehetra ao anaty karazana kabine ve ary milalao amin'ny tontolo avatar? Raha miresaka kely momba an'io hevitra io mandritra ny fotoana fohy isika, dia miverina amin'ny hevitra hoe "fahatsiarovan-tena". Alaivo sary an-tsaina ny hoavin'ny Neuralink amin'ny atin'ny Elon Musk amin'ny ho avy ary mandeha amin'ny tambajotra 5G. Manana fifandraisana amin'ny Wireless ianao avy eo amin'ny atidohanao miaraka amin'ny avataro amin'ny simulation ao amin'ny sehatry ny cloud ao Google. Noho izany ny olona izay mifehy ny avatar ao anatin'io simulation io dia ny atidanao voalohany izay ao amin'ny vatana misy anao ao amin'ity izao tontolo izao ity; Ilay olona hitanao rehefa mijery fitaratra ianao. Ny avatar ao amin'ny simulation dia mifehy avy amin'ny atianao voalohany. Ny avatar dia 'nentanina' ary azo jerena ao anatin'izany famolavolana izany ho olona manana aingam-panahy miaraka amin'ny 'fahatsiarovan-tena'. Izany fitaomam-panahy izany dia ny tsipika mahazatra amin'ny atianao voalohany.
Raha afaka manaraka ny voalaza etsy ambony ianao dia mangataka anao aho mba handinika akaiky an'ity fampiharana hevitra manaraka ity. Azonao sary an-tsaina izao hoe ahoana ny fomba iainana amin'ny simulation ary ahoana no ahafahan'ny solosaina mifehy io sary io ary ahafahantsika mijery ny fifandraisana an-tserasera amin'ny alalan'ny 5G amin'ny tambajotra toy ny ny aingam-panahin'ny avatar amin'io simulation io.
Avy eo isika dia tonga eo amin'ilay fanontaniana raha azonao an-tsaina fa ny vatanao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny atidoha dia mety ho lasa sarimihetsika amin'ny simulation. Raha mijery ny fanandramana indroa amin'ny mpitsikera Niels Bohr isika dia mampiseho fa misy ihany ny misy rehefa misy mpandinika. Ao amin'ny lahatsoratra maromaro nohazavaiko fa efa "miaina anaty simulation" isika. Manomboka tsara ianao raha ianao ity lahatsoratra ity Vakio tsara ny lohahevitry ny menu 'simulation' na midira amin'ny teny hoe 'simulation' amin'ny sehatry ny fikarohana. Mamela izany fampidirana ato ambadik'io aho, ary mametrahako ny fisainana amin'ny fiheverana fa efa "miaina anaty simulation" isika. Tsy nieritreritra an'izany aho tamin'ny teny nindramina, satria tsy afaka miaina amin'ny simulation ianao, fa afaka ny hanana ny fatokisanao tanteraka fa miaina ao anatin'izany, fa ny tena hita sy milalao (avy any ivelany).
Raha toa ka milalao simulation isika, dia tsy maintsy misy 'fifandraisana amin'ny fanahy' miaraka amin'ny toetra amam-patany any an-kafa, toy ny tsy maintsy hisy ny fifandraisana an-tserasera 5G tsy dia misy ifandraisany amin'ny simulation Google cloud raha toa ianao ka mandray anjara amin'ny simulation izay toa marina tokoa amin'ny 2045 . Izany 'fifandraisana amin'ny fanahy' izany dia ny fifandraisana amin'ny serasera amin'ny olona 'olona voalohany' ilay olona mipetraka eo amin'ny seza. Tsy voatery ho ny tranokala ao amin'ny atidoha, toy ny ao amin'ny sarimihetsika 'The Matrix', fa mety ho fifandraisana tsy misy tambiny. Ny avatar ao amin'ny simulation dia 'mihetsiketsika' ary nofehezina ivelany. Ny sarin'io simulation io koa dia azo ekena amin'ny ivelany. Angamba izany dia manana hevitra tsara kokoa momba ny hevitra hoe 'fanahy' na 'fahatsiarovan-tena'.
In ity lahatsoratra ity Nanazava aho fa mety ho vavolombelon'ny rafi-pitilanana virosy isika. Ao anatin'izany no hanazavako fa ity simulation ity dia natao handinihana ny loharanonay (ny 'endrika tany am-piandohana'). Ny mpanamboatra ny simulation amin'izao fotoana izao dia toa manondro an'i Lucifer. Mety ho fijerena miorina amin'ny fandinihana avy amin'ity tontolo "Sim" ity, fa ny zava-drehetra dia manondro fa ny simulation dia tokony hibaiko amin'ny lalana iray. Raha toy ny mpanamboatra simulation dia tsy maintsy manaja ny 'lalànan'ny safidy malalaka' ianao, dia misy fomba 1 ihany ny hanome toky ny vokatry ny lalao.
Ny lalàn'ny safidy malalaka
Raha tsy misy ny safidy malalaka, ny programa dia tsy simulation, fa tena karazana sarimihetsika, ny vokatr'izany dia efa azo antoka. Ny santionan'ny simulation anefa dia ny manolotra fanamby ho an'ireo mpilalao ary te-hizaha ny fomba tsara ananan'izy ireo ny lalao. Ohatra, tsy manamboatra fiaramanidina fiaramanidina ianao mba hahatonga ny fiaramanidin'ny fiaramanidina sy ny tany amin'ny seranan-tsambo, ianao manamboatra azy io mba hizaha ilay pilotany. Amin'ny fampisehoana an-tsarimihetsika maro dia tianareo ny hianatra ny fomba fitondran'ny mpilalao tsirairay sy ny mambra samihafa ary hijery izay safidy ataon'izy ireo amin'ny tsirairay sy miaraka aminy.
Ny hany fomba tokana ahafahana miantoka ny vokatry ny simulation, raha tsy mampihena ny lalànan'ny safidy malalaka, dia ny mametraka ireo karazana NPC maro (tsy misy sarimihetsika tsy milalao) araka izay azo atao ao anatin'ilay lalao izay tarihin'ny mpanamboatra ny lalao. Azonao atao, ohatra, mametraka ireo NPC ireo amin'ny toerana ambony ao amin'ny simulation ary manaraka ny script; peo iray izay mahatonga azy tsy ho vitan'ny mpilalao hafa haka fitarihana hafa. Azo jerena ao amin'ny ity lahatsoratra ity.
Eritrereto hoe misy mpanamboatra 1 ny simulation amin'izao fotoana izao, na noho ny antony tsotra fotsiny fa misy ekipan'ny mpanamboatra an'io "tany am-piandohana" io, dia azonao atao ihany ny mifehy ny isan'ny NPC sasany ao anatin'ny simulation; Ireo NPC izay manaraka ny script amin'ny simulation ary miezaka ny mandrindra ireo mpilalao hafa ao amin'ny tanjona sasany (tarihin'ny ekipa mpanorina). Na izany aza, misy fomba iray hafa handresena ny scripty sy ny vokatra, saingy isika aloha dia tsy maintsy mijery ny mpilalao rehetra ary manontany azy ireo hoe avy aiza ny fifandraisana tsy misy tambiny amin'ireo mpilalao fahiny; amin'ny teny hafa: firy ny mpilalao milalao ity simulation ity?
Avy aiza ny fanahy rehetra?
Ny isan'ireo olona eto amin'ity tany ity dia manatona ny 8 miliara. Raha manomboka avy amin'ny modely simulation isika, dia ilaina koa ny mpilalao 8 miliara amin'ny 'lay voalohany "mba hilalao ity lalao ity. Raha ny tena marina, tokony ho nanontany ahy ilay mpamaky tena mahay indrindra: Aiza no misy ireo fanahy rehetra ireo? Fantatsika ankehitriny fa ny foto-kevitry ny "fanahy" na "fahatsiarovan-tena" dia miorina amin'ny fifandraisany amin'ny planeta voalohany; ny endrika tany am-piandohana ivelan'ity simulation ity. Mijoro ho azy, ho toy ny fifandraisana am-bava miaraka amin'ny tenantsika manokana (araka ny voalaza etsy ambony). Noho izany tokony hisy mpilalao 8 miliara eo ho eo amin'ny sarany.
Miahiahy aho fa tsy misy fanahy 8 miliara ary tsy misy fitaovana fizarana fanahy, araka ny filazan'ny olona Wes Penre (jereo eto). Raha ny fijeriko azy ireo dia tantara tsy fanta-daza. Ny tena zava-misy dia ny mijery ny toetry ny teknolojia ankehitriny. Ao anatin'izany no ahitantsika fa mihamitombo hatrany ny robot ary ny tanjona dia ny hanamafisana ny fahaiza-manavaka ny fahatsapan'ny olombelona sy ny fihetseham-pony. Koa raha ny mpanamboatra (na ny ekipa mpanamboatra) an'io simulation io dia afaka mamorona sarimihetsika mamolavolan-tena (vatan'olombelona), dia azo inoana fa heverina fa maro ireo vatana / avatars izay hitantsika manodidina antsika dia mamerina ny tenany, saingy tsy misy ny fanaraha-maso ivelany. Izy ireo, tahaka ny, maso ratsy fanahy manandanja izay tsy manana 'Jake Sully' ivelany ary noho izany dia tsy mihetsiketsika. Noho ny mahamety azy, andeha hiantso an'ity NPC tsy misy dikany ity isika. Tsy mahavaky ny NPC ireo Souessess ary mety tena liana sy miombom-pihetseham-po. Izany dia noho isika mifampiraharaha amin'ny AI (amin'ny ati-bio). Ireo mpanao fanorenana an'io simulation io dia nampiasa "bôtôsy" tsara lavitra noho izany.
Manana ny NPC izay tarihin'ny ekipan'ny mpanamboatra an'io simulation io ianao ary ireo NPC izay tsy misy dikany izay manana 'intelligent intelligence' ary ampiasaina hanaraka ny script. Ny vondrona voalohany an'ny NPC dia tarihin'ny "fifandraisana tsy misy filaminana" miaraka amin'ny mpanorina (/ ny ekipa mpanorina) ary mifehy ny script. Ny vondrona faharoa manaraka ny script tsy misy olana.
Inona ny anjara asan'ny NPC tsy misy (zombie)?
Voalohany dia mijery ny vokany isika. Raha toa ka milalao simulation ianao ary voahodidin'ny NPC tsy misy ilana azy izay manaraka ny script, dia tsy maintsy hiatrehanao ny foto-kevitry ny 'fitaoman'ny namana' ianao. Ity simulation ity dia azo lazaina fa ara-dalàna ihany koa ka nanomboka nanamarina izany.
Ny dikan'ny hoe "tsy misy dikany"
Raha ny marina, ny foto-kevitry ny 'tsy misy dikany' ao anatin'ity tontolon'ny zava-misy ity dia tsy zavatra hafa afa-tsy hoe tsy misy 'Jake Sully' ivelany eo amin'ny bokotra an'io olona io.
Moa ve ianao manana fifanakalozan-kevitra amin'ny olona izay tsy mahalala akory ny dikan'ny teny hoe "fanahy" na "fahatsiarovan-tena", ankoatra ny hoe noraisin'izy ireo ny foto-pinoana na ny fironana ara-panahy? Hatramin'ny fotoana nahaterahako dia fantatro manokana ny "tsipika eny ivelany". Tsy mieritreritra ny tenako ny olona hitako rehefa mijery ny fitaratra aho. Fantatro amin'izay ny 'Jake Sully' izay manosika ny avatar ao amin'ity simulation ity. Efa nisy foana hatramin'izay. Ireo olona izay tsy mahay mandrindra ny NPC (fa iza no tena mahay sy miray saina) dia tsy mihetsiketsika (tsy manana Jake Sully ao amin'ny sehatra tany am-piandohana ivelan'ity simulation ity) ka tsy mahagaga izany. Ny miresaka momba ny 'fanahy' na 'fahatsiarovan-tena' dia mety ho karazana 'mandray anjara amin'ny fironana' na ny lahatenin'ny Robot Sophia; mifototra amin'ny 'fanangonana teny'.
Ny andraikitr'ireo NPC tsy voatery dia ny haka ny avatars (na koa: ny mpilalao voalohany izay mandray anjara amin'ny fampiasana an'io sarimihetsika marobe io amin'ny alàlan'ny avatar) mba hanaraka ilay soratra. Izy ireo dia tokony hanome ireo avara-pitaingan-tsindrimandry ireo ny fahatsapana fa vitsy an'isa izy ireo ary tsy misy ilàna izany. Tsy maintsy asehony ny hafalianao rehefa mandray anjara ianao na manao ahoana ny tsy fahombiazanao rehefa misy manelingelina anao. Izany no nahatonga anay mahita fa mihamaro ny mponina maneran-tany mihamitombo tato anatin'ny folo taona. Izany no fanalahidy farany amin'ny mpanorina ity simulation ity.
Nisy teboka iray nipoitra tany amin'ny toerana izay nitomboan'ny isan'ny NPC dia be dia be, manome ny mpilalao nentanim-panahy hatrany hatrany ny fahatsapana fa eo am-piafarana izy ireo. Miezaka manadino mihitsy aza fa resaka kilalao fotsiny izany; fa isika dia mijery simulation.
Zava-dehibe ny hamerenana indray ny maha-izy antsika sy ny fitokisana ivelan'ny fitantanana. Ireo NPC rehetra ireo amin'io simulation io dia mahatonga antsika hino fa very isika ary ao anatin'ny vitsy an'isa. Izany no fijerin'ny simulation. Toa misy olona an'arivony tapitrisa ao amin'ny simulation; Ankoatr'izany dia mety ho vitsy izay manandrana manatanteraka ny simulation. Ny atin'ny vatantsika dia tena sahirana loatra noho ny simulation. Izany dia ny atidoha fotsiny sy ny fihetseham-pony. Manelingelina ny fanavakavahana babylonianina ao anatin'ity simulation ity isika ary tsy maintsy mangina indray ary mihaino hoe iza isika. Tsarovy ny Jake Sully.
Lisitry ny rohy loharano: patreon.com
Tsia, tsy miaina amin'ny solosaina solosaina 'avy any ivelany' isika: manaisotra an'izany tsy misy dikany izany
Tags: Avatar, fanentanana, Characters, Featured, lalao, olona, Jake, maro, Non, Antenimieram-bahoaka, mpilalao, milalao, tena, simulation, Sully, fanahy
8 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 56
Raha mieritreritra ianao hoe "oh shit angamba aho NPC!"
Eo am-piandohana, mety tsy ho ato amin'ity tranonkala ity angamba ianao, saingy mety ho efa ela no nanandrana ny atidohanao ny atidoha ny adiresinao.
8 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 31
Na dia mitandrina tsara aza fa mety misy mpanao fanorenana maro an'arivony no tafiditra amin'izany ... Ary maninona izy ireo no manao izany?
8 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 53
Tsy mitantara an'i Hans tsara aho.
Manoritsoritra ny fahafaha-manao ihany aho ary miantso azy ho ekipa mpanorina; satria i Ray Kurzweil dia mety ho mpanamboatra simulation manaraka ary mametraka ekipa mpandahateny mba hanomana ny code simulation.
Vakio manokana ireo lahatsoratra eo ambanin'ny rohy.
8 Jolay 2019 ao amin'ny 19: 08
Efa azoko ny simulation ho toy ny zaza kely iray, saingy ny fandaharana tsy tapaka sy ny famerimberenana ny zavatra dia voan'ny otrik'aretina!
Tamin'izaho mbola kely dia nahatsapa aho fa tokony hiala eto aho ary manontany tena hoe inona no mety ho faty mba hahatsapa ny zavatra nitranga. Tsy te ho faty aho satria tsy te hiaina, fa noho ny fahalianana!
Any aoriana any dia manontany ny ray aman-dreninao! "Inona no tianao hatao eo amin'ny fiainanao?" Hoy aho hoe, "Tsy ho zavatra na inona na inona ary tsy hianatra aho satria ireo no tsy mahaliana ahy" Dia hoy ny ray aman-dreniko: fa tokony ho lasa zavatra tsy misy dikany ianao!
Nolazaiko fa avy eo aho izay te-ho tonga ary handehandeha aho.
Ary taorian'izay dia afaka nihaino tsara kokoa ny fihetseham-poko aho satria amin'izao fotoana izao dia tena voasambotra ao amin'ny tranonkalan'ny bullshit!
Noho izany misaotra an'ity lahatsoratra ity! Tsapako indray ny fifandraisana amin'ny tena izy!
8 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 22
Ary inona no eritreretinao mikasika ny hevitra fa ny tsy manan-tsahala dia afaka mahazo tsindrimandry avy amin'ireo olona nentanim-panahy mandritra ny androm-piainany? Lazao koa hoe manentana fanahy.
8 Jolay 2019 ao amin'ny 22: 00
Avy eo dia diso hevitra ianao. Vakio indray mandeha tsara.
Azonao alaina sary an-tsary hafa ve ianao rehefa milalao playstation?
9 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 16
Tsia, aza mihinana.
Fa raha ny atin'ny hafa dia manana atidoha afaka mandresy azy.
Sa tsy izany no mety hitranga satria manatanteraka ny fandaharam-potoana izy?
9 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 55
Ny avatar tsirairay dia manana atidoha ary afaka manao zavatra maro ianao nefa tsy mahatonga ny fifandraisana amin'ny fanahy hitsangana.
Ny NPCs amin'ny lalao Playstation dia tsy ho tonga tampoka eo amin'ny bokotra tampoka.
9 Jolay 2019 ao amin'ny 03: 07
Mieritrereta fa azo atao ny mivarotra ny fanahinao amin'ny fikambanana tsy mananaina. Midika izany fa mampidina ny tenanao amin'ny iraika ambin'ny folo (fara fahakeliny ambany) ianao ary very ny fifandraisana misy anao. Mivarotra ny fanahinao ianao mba hampakatra ny tenanao amin'ny fandaniana ny hafa amin'ny alalan'ny herisetra, famonoana sy fampielezana lainga mba hiarovana ny herinao.
Vao avy any an-trano ianao, ny hiverina hiverina.
Tsy midika izany hoe izaho no masina, fa tompon'andraikitra amin'ny zavatra ataoko. Tsy manao fombafomba ara-pivavahana tsy maotina aho. Raha fantatrao ny momba anao tany am-piandohana, dia tadiavinao ny fifandraisana ary tsy havaozina amin'ny ambany kokoa. Satria tsapantsika izao fa efa nanao izany taloha isika ary matetika mahatsapa ho lavitra ny trano eto amin'ity planeta ity.
Ny zavatra soratanao ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny zava-mitranga rehetra, mahita fa momba anao sy ny valinteninay amin'izany.
9 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 55
Lahatsoratra tsara, olana goavana. Azo antoka fa tsy ho an'ny mponina ara-dalàna, ny rindrambaiko dia tsy natao ho amin'izany.
Ny fanontaniana dia mitoetra amin'ny hoe iza no nanao an'io maya io, ny tsikera, ary ny zavatra azony avy amin'izany. Angamba ilay mpanorina lehibe dia i Losifera, ilay "mpanazava maivana", ary miaraka amin'ny tsorak'ireo lehilahy avy ao amin'ny script izay valisoa avy aminy? ??
Inona no nandresy an'i Losifera tamin'ity rafitra ity? Mahafinaritra azy ve ny volany? I Lucifer ve Andriamanitra?
9 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 55
Vakio eto ny lahatsoratra mifandraika momba ny sela misy ny sela:
Lucifer no mpanamboatra ny rafitra virosy (ny simulation) izay ataontsika. Amin'io lahatsoratro io dia manazava aho fa toa ny fikasana dia ny hampiditra ny sehatra quantum ("ny sela voan'ny").
Izany no mahatonga ny andriamanitry ny fivavaham-poko rehetra ihany koa Lucifer mangingina ary ankehitriny dia mivavaka am-pihetsiketsika (raha mikaroka ao amin'ny YouTube ianao) avy amin'ny Eglizy Katolika:
9 Jolay 2019 ao amin'ny 15: 19
Amin'ny (amin'ny) ny masoko dia ny fitarihana sy ny fijinjana ((fanodinana)) ny hery entina hitazonana io matematika fanaraha-maso io. Jereo ireo torolalana samihafa ao amin'ny Baiboly, manasaraka ny akofa sy ny katsaka / osy sy osy, sns.
Mamafaza izay hijinjanao, ny valin-kitsim-pitondrantena avy amin'ny eter.
9 Jolay 2019 ao amin'ny 15: 25
Tsara homarihina fa ny fivavahana sy ny dualsime (modely avy amin'Andriamanitra / Satana ary ny endrika hafa ny dualisma, toy ny kristiana mifanohitra amin'ny finoana silamo, ny mifanohitra amin'ny marina, yin sy yang, sns.) Dia ampahany amin'ny lisitry ny lisansa Losifera mba hamoronana ny fanararaotana izay mitarika ny fitarihana DC tanjona farany.
Ny tanjona faratampony dia ny filalaovan'ny fanahy (izany no farany amin'ny anao - ilay endrika momba ny endriky ny sela / toetra mahatalanjona) hanompo ny rafitra viriosy mba hampidirana sy haka ny sela / sela.
Izany no antony maha-manan-danja ny mandà / mandà ny finoana sy ny lalana mifandray amin'ny olombelona amin'ny endriny (izay iray ihany sy mitovy amin'ny fampanantenana hoe 'fiainana mandrakizay' avy amin'ny fivavahana) ary mampahatsiahy anao fa Mitendry simia (viriosy).
9 Jolay 2019 ao amin'ny 15: 34
Ny asa mafy idd hatao dia eo am-baravarana eo am-baravaran'ny seho.
9 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 56
14 Jolay 2019 ao amin'ny 16: 41
Fanadihadiana goavana; misaotra betsaka. Izaho koa dia olona iray izay mahatsapa ny andro iray fa maro ireo zombies ao amin'ny 'lalao'. Ireo izay tsy misy 'zom-pirenena' no nitazona ahy eto, raha tsy izany dia lasa 'mbola' aho raha tsy nahatakatra tsara ny zava-mitranga. Afaka miady saina foana ianao hoe nahoana no misy olona iray, ohatra, tsy mahatsapa fa ny fanehoana ny toetr'andro dia azonao atao. Na ahoana, raha mihevitra ianao fa nifanaraka tamin'ny kilasy nandritra ny fotoana nidiran'ny mpampianatra, dia mety tsy hahomby izany vondrona izany rehefa raisinao izany ho toy ny maherifo. Ny valiny dia ny loharano manana backup, referansy amin'ny inona 'original', tsy ny zombie no. Ny fijeriny dia ny zavatra nianarany, noraisina, natsangana, nitelina, na inona na inona. Tsy manana intsony izy. Amin'ny maha-mpampianatra hira miaraka amin'ny traikefa niainan'ny 30 taona nandritra ny fampianarana, dia fantatro fa misy foana ny olona afaka mifandray amin'ny feo madio sy be taraina. Ny ankamaroany dia tsy afaka manao izany; dia afaka 'manahaka' fotsiny ary tsy mety tsara amin'ny fihirana (tsy misy fahalavorariana ara-teknika toy ny PA sy mikrôfa). Ireo mozika avo lenta ireo dia manamboatra milina fanontam-pirinty mahafinaritra, tsy afaka mahatsapa sy mamorona amin'izao fotoana izao; fa tsara fotsiny ny miteraka. Taratasy manify kely manasaraka, fa mazava. Fanoherana ny fikarohana momba ny tena maha-izy anao, ny mari-pamantaranao dia famantarana famantarana ny 'fanjakana zonbi'. Ary na izany aza, tsy vitako mihitsy ny nanova ny mpihira iray avy any an-doha mankany amin'ny tany am-boalohany. Tsy misy, hatramin'izay. Ny ankamaroan'izy ireo dia mihevitra fa miaraka amiko izany; satria miresaka momba ny fahitana ny mason-tsivana miaraka amin'ny rafitry ny fahita matetika sy ny firindrana. Afa-tsy ny lesona ho an'ny tarika; izay mbola mahaliana ihany koa ilay mpaka sary. Afaka miditra foana amin'ny 'fitsaharana' ianao. Manana fijaliana be dia be ny mahatakatra an'ireny famakafakana ireny izay hazavainao eto, ary izany no mahatonga ny lanjany amin'ny volamena. Fa mamporisika anareo ihany koa ny hitoetra ho toy ny tany am-piandohana manohitra ny tsindry ary tsy handray anjara amin'ny viriosy; ary, ohatra, tsy azo atao vaksinina. Amin'ny taona 57 aho dia tsy mbola nandray anjara velively momba izany mihitsy ary afaka milaza fa tena nikarakara tsara ny 'orijinal' aho. Ny tanjona tokana tamin'ity indray mitoraka ity, talohan'ny nandaozako azy indray, dia tokony hahatakatra izany rehetra izany ary avy eo dia hanao veloma an'io lalao io amin'ny fandriampahalemana. Ny zanako, izay manana ny karazan-drà mitovy amin'izany, ary ny karazan'aretina toy izany dia mipoitra foana mba hamokarana 'originals', izany no fanontaniana manaraka ahy, mianatra mianatra tsara ny lalao aho, mba hahafinaritra (toy ny mpandihy, ohatra) fa tsy mijaly amin'ireo mpamono zombies miaraka amin'ny fihetseham-po nasehony ry zareo ary nanandrana nanery anao ho trosa. Tena miasa tsara koa. Heart miarahaba!
14 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 25
Misaotra an'i Patricia
Ary toy ny ao amin'ny lesona nataonao, ity lahatsoratra ity dia tonga amin'ny tsy misy tsy misy dikany, satria ho an'ny hafa dia tantara iray mahaliana izay tsy manelingelina na inona na inona. Izany no mahatonga anao hahita ilay volamena.
Ireo akademia sy mozika amin'ny ati-doko dia toerana mahafinaritra mba hanolorana ireo photocopiers tena tsara ary mba hividy ireo olona tsy dia mientanentana eo amin'ireo photocopiers. Misaotra anao nizara ny traikefa azonao tamin'ny sehatra fihirana.
Ny valiny rehetra dia avy amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet miaraka amin'ny lohanao. Izany no antony mahatonga ilay hira hoe 'fikorontanana babylonianina amin'ny kabary' dia milaza aho fa tsy maintsy mangina isika ary mihaino hoe iza aminareo.
« Moa ve i Ursula von der Leyen (filoham-pirenena EU ho avy) miaraka amin'ny rà tokana toy ny fianakavian'ny mpanjaka britanika?
Ny mari-pankasitrahan'ny banky Deutsche Bank dia namoaka voalohany ny fisamborana aloha? »
Total visits: 16.080.813
mari-toerana op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1